Galmudug oo saddex Ceel biyood ku wareejisay bulshada ku nool degaano hoos taga Cadaado | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Galmudug oo saddex Ceel biyood ku wareejisay bulshada ku nool degaano hoos taga Cadaado
Cadaado-(SONNA)- Wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee Galmudug iyo maamulka degmada Cadaado ayaa maanta saddex Ceel biyood oo ku shaqeeya habka Sollar-ka ku wareejiyay dadka ku dhaqan degaanno hoostaga degmada Cadaado.
Xasan Cabdi Cusmaan oo xubin ka ah hay’adda IRC ayaa sheegay inay dayactir ku sameeyeen ceelasha kala ah Harqaboobe, Farjanno iyo Carmooleey, iyagoo ka jawaabaya farriin kaga timi wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha kadib cabasho biyo yari oo ay bulshadu u gudbisay maamulka Galmudug.
Xoghayaha degmada Cadaado Durraan Goodir ayaa Wasaaradda Tamarta Galmudug iyo hay’adda IRC ugu mahad celiyay ceelasha ay dib dayactirka ku sameeyeen, wuxuuna dadka gacanta ku haya ka codsaday inay dhimaan qiimaha iminka lagu iibsado biyaha maaddaama laga baxay biyo yarida halkaasi ka taagnayd.
Ceelashan ku shaqeeya Sollar-ka oo ay dayac tir ku samaysay hay’adda IRC ayaa howlgab ahaa muddoonkii u dambeeyay kadib markii uu sare u kac xooggan ku yimid shidaalkii loo isticmaalayay matoorrada.
Previous articleGuddiga loo xilsaaray miisaaniyadda Qaranka oo yeeshay kulankoodii ugu horreeyay
Next articleRa’iisulwasaare Rooble oo booqday dhismaha xarunta Xukumadda+Sawirro